Apple TV + Thriller 'Mpanompo' Voatendry ho an'ny 2021 Loka Safidy TV | Avy amin'ny mac aho
Apple TV + mampihetsi-po 'Mpanompo' voatendry ho an'ny 2021 TV Choice Awards
Miverina amin'ny entana izahay amin'ny Apple TV + sy ny kalitaony tsy mampino. Azonay atao ihany koa ny milaza aminao ny fomba nanendrena ny iray amin'ireo vokariny ho loka. Amin'ity indray mitoraka ity isika dia miresaka momba ilay Mpanentana mampihetsi-po izay miatrika ny loka TVChoice Awards 2021. Vaovao tsara manamafy ny fahasalaman'ny fizarana fialamboly an'i Apple.
Ny servant dia iray amin'ireo seho malaza indrindra amin'ny Apple TV +, miaraka amin'ny vanim-potoana faharoa misy azy ankehitriny eo amin'ny sehatra streaming Apple. Nanambara ny orinasa fa ity andiany ity notendrena handray ny 2021 TV Choice Awards ao amin'ny sokajy Best Dramatic Series. Mifaninana amin'ireo andian-tantara malaza hafa, ao anatin'izany ny Dark's Netflix, ny StarnyPlay's Pennyworth, ary ny Amazon Prime Video's This Is Us. Tsy toy ny loka hafa toy ny Golden Globes sy Oscars, ny mpandresy amin'ny TV Choice Awards dia safidin'ny besinimaro amin'ny alàlan'ny fifidianana.
Hambara an-tserasera ny mpandresy amin'ity taona ity tamin'ny voalohan'ny volana septambra ary amin'ny alàlan'ny www.tvchoicemagazine.co.uk manome ny mpankafy fahita fahitana fahitana fihetseham-po avy amin'ny seho nandresy sy kintana amin'ny sokajy manomboka amin'ny tantara an-tsehatra ka hatramin'ny hatsikana mankany amin'ny opera savony.
Ny tantaran'ny Mpanompo mihodina manodidina an'i Leanne, mpitaiza iray nokaramain'i Dorothy sy Sean Turner hikarakara saribakoly. Ny fizarana voalohany dia tamin'ny Apple TV + fotsiny tamin'ny Novambra 2019, raha ny fizarana faharoa kosa dia tamin'ny volana Janoary 2020. Efa navaozina ho an'ny vanim-potoana fahatelo ny seho.
Hihaino tsara isika raha toa ka nahazo ny loka tamin'ny farany. Ny mazava dia ity dia iray amin'ireo izay tena manandanja tokoa amin'ny orinasa rehetra satria ny vahoaka no manapa-kevitra hoe iza amin'ireo andiany no tsara indrindra. Izany no antony irinay mirary soa ho an'i Apple sy i Mpanompo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple TV + mampihetsi-po 'Mpanompo' voatendry ho an'ny 2021 TV Choice Awards